वैदेशिक रोजगारको ठगी : यसरी भयो रकम फिर्ता,कार्यकक्षमै कर्मचारी गुट्खा चपाउँदै (भिडियोसहित) - TV Annapurna
विनोद देवकोटा टिभी अन्नपूर्ण । नेपालबाट प्रत्येक दिन १५ सय बढीको सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपाली भूमि छोडेर तेस्रो मुलुक हानिन्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक पन्ध्रै सय बढीको सङ्ख्यामा सेवा लिन बेदेशिक रोजगारमा जाने सेवाग्राहीहरुको भिड हुन्छ । दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा विभागमा आउने सेवाग्राही ठगिन भने अझै रोकिएको छैन । उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौँ ताहाचल स्थित कार्यालयमा श्रम स्वीकृति लिन आउँदा प्रति व्यक्ति ५ सय देखि पन्ध्र सयसम्म ठगिरहेको पाइएको छ । उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिँदा बुझाउनु पर्ने १ हजार ५ सय र बिमा रकम बुझाउँदा ठगिनु परेको पाइएको छ । विभिन्न बिमा कम्पनीमा बस्ने एजेन्टहरूले उनीहरूलाई ठगिरहेको पाइएको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व विभाग नजिकै बैङ्क शाखा नहुँदा एजेण्टहरुलाई ठग्ने बाटो अझै फराकिलो बनेको हो ।
मान्छे अनुसार फरक फरक, यसरी ठग्छन् बिचौलियाले
१८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहकाले तिर्नु पर्ने बिमाङ्क रकम ३ वर्षका लागि ३ हजार ९ सय २४ र राजश्व स्वरूप तिर्नु पर्ने १ हजार ५ सय गरी जम्मा ५ हजार ४ सय २४ तिर्नु पर्नेमा ६ हजार ५ सय सम्म लिइएको पाइएको छ । झापा हरिया बुधबारे १ का २८ वर्षीय जङ्ग बहादुर भुजेल आइवारमात्रै मलेसियाबाट १ महिनाको छुट्टी लिएर स्वदेश फर्किए । स्वदेश फर्केर घर नपुग्दै उनी पुनः मलेसिया जाने चाँजोपाजो मिलाउन थाले । एक महिनापछिको तयारीका लागि उनी बेदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिन पुगे । अनलाइन फर्म, सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व र बिमाको रकम बुझाउन उनी विभागको कार्यालयबाट बाहिर निस्किए ।
बाहिर निस्कने बित्तिकै उनी फेला परे एक दलालको फन्दामा । सिटिजनलाईफ इन्सोरेन्स कम्पनीको शाखामा बसेर काम गर्ने कैलाली धनगढी घर बताउँने एक व्यक्तिले उनलाई सडकबाटै कार्यालयमा र्पुयाए । उनले तिर्नु पर्ने ३ हजार ९ सय २४ बिमा रकम र १ हजार ५ सय सरकारी राजश्व गरी ५ हजार ४ सय २४ हो । तर उनलाई ६ हजार रकम बुझाउन भनिएपछि उनले ६ हजार नै बुझाए ।
अर्का कतार जान लागेका काभ्रेका ३८ वर्षीय ओम नाथ पौडेल पनि सजिलै बिचौयिाको जालोमा परे र सोझै एक हजार ठगिए । १ हजार उनले पनि सोही सिटिजन लाइफको कार्यालयमै बस्नेले ठगेको बताए । उनले पनि तिर्नु पर्ने ५ हजार ३ सय ३० बिमा रकम र १ हजार ५ सय राजश्व गरी ६ हजार ८ सय ३० हुनु पर्ने हो । तर उनीबाट पनि ८ हजार लगियो । उनीबाट सोझै एभार सय ७० थप रकम ठगिएको पाइयो । उनी भन्छन्, मैले यती पैसा कसरी लाग्यो, मलाई बिल चाहिन्छ भने तर मलाई बिल दिइएन । उनले आफूलाई सडकमा हिँड्दै गरेको अवस्थामा बिचौलियाले समातेर लिएको बताए ।
यसरी भयो ठगिएको रकम फिर्ता
टिभी अन्नपूणले यस अघि पनि यही विषयमा रिर्पो्िटङ गरेको थियो । करिब एक महिना अघि गरेको रिर्पोटिङ्मा पनि प्रति व्यक्तिबाट १ हजारदेखि दुई हजार सात सयसम्म ठगेको पाइएको थियो । करिब एक महिना पछि गरिएको अर्को स्थलगतमा ठगीको घटना बन्द नभएको पाइयो । वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा भेटिएका ९५ प्रतिशत सेवाग्राहीले कम्तीमा ५ सय देखि २ हजारसम्म ठगिएको बताए । हामीले कुरा गरेका अधिकांश ठगिएको भए पनि कसले ठगेको खोजी गरौँ, हामीलाई सहयोग गर्नुस् भनेकोमा समय नभएको भन्दै सहमत देखिएनन् । तीनै मध्येका झापाका जङ्ग बहादुर र काभे्रका भोला नाथ भने आफूलाई ठगिएको र सह्यो ग गर्न तयार रहेको बताएपछि हामीले उनीबाट ठगिएको ५ सय र हजार फिर्ता गराउन सफल भयौ ।
उनीहरूले भने अनुसार पैसा तिरेको सिटिजन लाईफ इन्सोरेन्सको कार्यालयमा हामीपनि पुग्यौ । सुरुमा हामीले तपाइहरू काम गरेवाफत सेवा शुल्क कति लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मान्छे हेरेर लिने गरेको एक कर्मचारीले स्वीकारे । कम्तीमा ५ सय देखि उस्तै परे पन्ध्र सयसम्म लिने गरेको उनले बताए । यसरी रकम लिइनु कानुन सम्वत हो त ? भुक्तानी गरेको बिल दिनुस् भन्दा ती कर्मचारीले बिल दिन नसक्ने बताए र आफूले लिएको रकम कानुन सम्वत नभएको पनि स्वीकार गरे । त्यसछि अनैतिक गैर कानुनी रूपमा लिएको रकम फिर्ता गर्नुस् भने पछि ती दुवै जना कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट लिएको बढी रकम फिर्ता गरे ।
विभागको कार्यालय भित्रै गुट्खाको खाल
वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा कर्मचारीको कार्यकक्षमै गुट्का खाएको पाइएको छ । कार्यालयको दर्ता शाखासँगै जोडिएको विश्राम गृहमा विभागका कर्मचारी र रोजगारदाता व्यवसायीहरू बस्ने कार्यकक्षमा गुटका खाएर थुकिरहेको पाइएको हो । कार्यकक्षमै बसिरहेका एक जना म्यानपावरका कर्मचारी गुट्का खादै गरेको हाम्रो क्यामरामा कैद भएका छन् ।
यसरी कार्यालयको कार्यकक्षमै गुट्का खान पाइन्छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । उक्त कक्षमा कोठाको चारैतिर सुर्ती, गुट्का खाएर थुकेर दुर्घ्न्धित बनाएको देखियो । कार्यकक्षभित्रै करिब २० भन्दा बढी गुट्खा खाएर फालेका खोस्रा भेटिए । कोठाको चारै कुना र प्रत्येक सोफाको पछाडि पट्टी गुट्का खाएर थुकेको पाइएको हो । जबकि सरकारले सार्वजनिक स्थानमा सुतीजन्य पदार्थ र खैनी गुट्का खान नपाएने र खाएको पाइए कारबाही हुने नियम बनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुखको अनविज्ञता, कर्मचारीको बचाऊ
वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौँ कार्यालयका प्रमुख भविश्वर पाण्डेले भने कार्यकक्षमै गुट्का खाएको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै रेडिमेड जवाफ दिए । उनले भने, म यहाँ अंको करिब एक महिना भयो । मेरो ध्यान सेवाग्राहीको सेवाप्रति छ । त्यतातिर मेरो ध्यान गएन । म सेवा प्रति नै केन्द्रित छु । यदि त्यस्तो पाइए एक पटकलाई सम्झाउने र फेरी यस्ता घटना दोहोरिदै गए कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए । जबकि गुट्का खाएर भित्तै भरी रङ्गीन भएको कार्यकक्षको ढोकाबाटै कार्यालय प्रमुख पाण्डे दैनिक ओहोर दोहोरा गर्छन्।
अर्को प्रसङ्गमा प्रमुख पाण्डेले वैदेशिक रोजगारमा जाने सेवाग्राही ठगिने गरेको सुनेको भए पनि उजुरी कसैले नदिएको उनले बताए । विभिन्न एजेण्डहरुले ठगीरहेको सुनिएको छ । त्यसका लागि केही दिन अघिमात्रै उनीहरूसँग छलफल गरेर एक खालको सहमति भएको र आगामी साउनदेखि सेवा वापथ तीन सयमात्र लिन पाउने र एजेण्डहरु पनि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने सहमति भएको बताए । साथै उनले यस्तो कार्यको प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र विभागले पनि अनुगमन गर्न सक्ने बताए । काममा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनले ठाडै अस्वीकार गर्दै सेवामा कुनै कमी नगरिएको बताए ।